Apple ayaa soo saareysa ogeysiis cusub oo ku saabsan iPhone 5S | Wararka IPhone
'Riyooyin', ku dhawaaqida cusub ee iPhone 5S ee ay daabacday Apple
Alex Ruiz | | Barnaamijyada IPhone, iPhone 5s
Apple ayaa daabacday a xayeysiis cusub oo loogu talagalay iPhone 5S cinwaankeedu yahay 'Riyooyin', ee uu isagu masuulka ka yahay la socoshada ina tusaya kartida weyn waxaad haysataa aaladda. Sida qalab hore ogeysiisyo ku saabsan caafimaadka iyo jir dhiska ama isticmaalka iPhone 5S ee waalidiinta. Shirkaddu waxay ku sii socotaa xariiqda taabashada xariiradeena adeegsiga la siin karo ee loo dejiyay iPhone-ka, codsiyada iyo agabka. Xayeysiintan cusub ayaa muujineysa adeegsiga ay bixin karaan khubarada saadaasha hawada, waaxda dabdamiska iyo sida loogu isticmaalo daawada xoolaha, iyo kuwo kale. Muunad in wax kasta oo aan qiyaaseyno ama ku riyoono ay run ku noqon karaan taleefanka Apple.
La soco safka kuwii hore hoosta halkudhigga uu ku dhammaanayo, «Ywaad ka awood badan tahay sidaad moodeyso » waxaana weheliya hees ku habboon muuqaalada la soo bandhigay. Cinwaanka heesta ayaa ah 'Waan Koray'Fanaanka Jennifer O'Connor. Tani waa tusaale kale oo ka mid ah sumcadda weyn ee ay abuurtay shirkadda leh tufaaxa la qaniinay iyo sida loogu faraxsanaado xaaladaha maalinlaha ah ama xirfadeena iyo caawimaadda weyn ee ay iPhone 5S na siiso.
Xayeysiintu waxay muujineysaa arjiga lagu cabirayo xawaaraha dabaysha Vaavud anemometer. Gabar waxay adeegsaneysaa barnaamijka kaamirada macruufka ah ee iOS ee ku xiga qalabka lens-ka ee iPhone-ka Olloclip isla markaana giraan giraan ah. Waaxda dabka ayaa adeegsata barnaamijka Jawaabta Deck SBC si loo gaaro goobta ay xaalad degdeg ahi ka jirto. Dhaqtarku wuxuu kula xiriirayaa bukaanka Latino barnaamijka Codka Wareejinta. Dhaqtarka xoolaha ayaa adeegsanaya arjiga AliveECG Vet si loo qaado garaaca wadnaha faraska. Duuliye ayaa ku abuuraya khariidad hawo-mareen ah leh ForeFlight Mobile ugu dambayntiina cilmi baarayaasha qaar waxay qaadaan talaabooyin ay ku falanqeeyaan biyaha dalabka SAM-1 iyo qalabka lagu xiro dekedda dhagaha. Ololaha xayeysiinta ayaa horay looga sii daayay Mareykanka dhawaana wuxuu ka soo muuqan doonaa meelaha xayaysiinta telefishanka ee adduunka oo dhan.
Sideed u aragtaa ku dhawaaqista cusub ee iPhone 5S? Miyaad qiyaastay adeegsigaas?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 5s » 'Riyooyin', ku dhawaaqida cusub ee iPhone 5S ee ay daabacday Apple
Homo technologicus ...
Maya, 6-da ayaa soo bixi doona waqti aan badnayn: Uma maleynayo in qofna uusan ku dhiirran doonin inuu iibsado 5s markan isagoo aan si dhab ah u ogeyn waxa soo socda.
Ma jiraan wax cusub, sida had iyo jeer Apple a
2-3 bilood oo ah
Sii deynta iPhone cusub, ayaa ku burburinaysa daawadayaasha xayeysiinta iphone-yada hadda jira iyo waxa ay awoodaan inay qabtaan .. Ma xasuusataa xagaagii hore? Ku dhawaaqida iPhone 5 iyo malaayiin dad ah oo isticmaalaya kuna raaxeysanaya kamaradooda sawirada, kuwa ugu yar ee ka warqaba tiknoolajiyada «cuncun» iyo ka dib 2 bilood oo afka oo dhan afka ku haya, iPhone cusub oo leh kaamarada la hagaajiyay iwm ... Wax cusub ma ahan ..
Ku jawaab Monster
Dhamaadka xayeysiinta waa in la dhahaa: "waxaas oo dhan, inta soo hartay sidoo kale waa ay sameysaa."